केपी ओली कती अमानवीय ? प्रकाशको मृ'त्यु हुँदा अमानवीय र रुखो शैली देखाए : प्रचण्ड - Himali Patrika
केपी ओली कती अमानवीय ? प्रकाशको मृ’त्यु हुँदा अमानवीय र रुखो शैली देखाए : प्रचण्ड
हिमाली पत्रिका १९ माघ २०७७, 8:13 am
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफू शोकमा हुँदा रुखो व्यवहार देखाएको स्मरण गरे । धनगढी पुगेर हिजो उनले ओलीलाई अमानवीय र निर्मोही भने ।
छोरा प्रकाशको मृ’त्यु हुँदा आफू झापामा ओलीको पक्षमा भोट माग्न पुगेको सुनाए । तर, ओलीले छोराप्रति अलिकति पनि सम्झना नगरेको र योगदानबारे पनि केही नबोलेको बताए ।
जुन दिन ओलीको चुनावी क्षेत्रमा भोट माग्दै थिएँ प्रकाशको हृ’दयघातबाट मृ’त्यु भयो, प्रचण्डले भने,‘ओली जत्तिको अमानवीय र रुखो मान्छे देखेको छैन । उनको चुनावमा म गएको बेलामा छोराको मृ’त्यु भयो । उसको योगदान त छ नि, थोरै सम्झने पनि गरेनन् ।’
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो परिवारप्रति व्यङ्ग्य गरेकोमा प्रचण्डले कडा जवाफ दिए । उनले छोराछोरीलाई सँगै आन्दोलनमा लगेको र योगदान दिएको सुनाए । ‘म निसन्तान भइनँ, सन्तान भए मेरो गल्ती हो ।
दोष दिन मिल्छ ?’ उनले भने,‘छोराछोरी भएपछि आन्दोलनमा लागे । जेल बसे । तीन वर्ष भैरवनाथ गणमा बसेको चानचुने कुरा हो । बन्दुक बोकेर जङ्गल हिंडेको ख्याल ख्याल हो । छोरी भएपछि विवाह हुन्छ ज्वाईँ हुन्छ । छोरा भएपछि बुहारी हुन्छन्, मेरो दोष हो ?’
प्रचण्ड–माधव पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि बोल्यो ओली पक्ष
नेकपा केपी ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाइएको जानकारी दिएको छ । प्रचण्ड-मााधव पक्षले सोमबारका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएलगत्तै ओली पक्षको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले प्रेस नोट जारी गरी उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
रिजालले हाल महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलबाट कुनै पनि बैठक नबोलाइएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रेस नोटमा पार्टीको विधान, अभ्यास, प्रचलन र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसमेतका आधारमा अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले मात्रै बैठक बोलाउन सक्ने स्पष्ट पार्दै बैठक नबोलाइएको जानकारी दिइएको छ ।